Dowladda KMG ah oo muddo kooban xirtay samafalayaal Turki ah oo Xerada Aal-Yaaasir ee KM-50 ka qaybiyay raashin | kaarshe Blog
Ciidamada hay’adda nabadsugidda DKMG ah ee Somalia ayaa xirtay muddo kooban maanta laba samafale oo u dhashay dalka Turkiga, kuwaasoo ay ku eedeeyeen inay u qaybiyeen barakacayaal ka mid ah kuwa abaaraha oo ku jira xerada Aala-Yaasir oo ku taalla deegaanka KM-50 ee gobolka Shabeellada hoose oo ay maamusho Xarakada Al-shabaab, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda KMG ah ee Soomaaliya.
Xiriiriyaha arrimaha gargaarka bani’aadamnimo ee xukuumadda Soomaaliya, Maxamuud Daahir Faarax (Qooleey) ayaa sheegay in sidoo kale la xiray samafalayaal Soomaali ah oo howsha la waday samafalayaasha Turkiga, kaddib markii ay sheegi waayeen war cad oo ku saabsan kulan ay la yeesheen xubno ka tirsan Al-shabaab oo dagaal kula jirta DKMG ah.
“Samofalayaasha Turkiga ah waa la xiray, waayo lama aysan xiriirin hay’adda amaanka Qaranka ka hor intii aysan aadin deegaannada ay Al-shabaab ka taliso. Waxayna la kulmeen xubno Al-shabaab ka tirsan iyadoo aan ogolaasho ka haysan guddiga ammaanka dowladda Soomaaliya,” ayuu Qooleey u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters.
“Hadda waa la sii-daayay,” ayuu yiri, isagoo ku daray in samafalayaashii Soomaalida ahaa ay weli ku jiraan jeelka. Sidoo kalena ay xiran yihiin labadii darawal ee waday gaadiidkii ay ku tageen xubnaha deegaannada ay Al-shabaab ka taliso.
Ilo wareedyo ka tirsan DKMG ah oo codsaday inaan magacyadooda la sheegin ayaa daboolka ka qaaday in sii-daynta samafalayaasha Turkiga ah ay ku timid wadahadallo ay la yeesheen madaxweyne Sheekh Shariif iyo danjiraha Turkiga ee Soomaaliya iyo dalalka bariga ah taliyaha hay’adda nabadsugidda dowladda Soomaaliya.
“Xarigan oo kale waa mid mararka qaarkood dhaca, kaasoo la xiriira xalaadaha ammaan ee jira. Samafalayaashii Turkiga ahaa cudur-daar ayay ka bixiyeen khaladka dhacay,” ayuu yiri sarkaal ka tirsan haya’dda gargaarka bani’aadamnimo ee Turkiga oo la hadlay saxaafadda, kaaso diiday in magaciisa la sheego.
Samafalayaashan isugu jira Soomaalida iyo Turkiga ayaa waxaa la xiray xalay kaddib markii ay shalay oo Isniin ahayd cunno gargaar ah u soo qaybiyeen barakacyaashii abaaraha oo ku jira xero ku taalla deegaanka 50-km dhinaca koonfureed kaga beegan Muqdisho taasoo lagu magacaabo Aala-Yaasir oo ay maamusho Xarakada Al-shabaab.
Mr. Mutar Kacakadam ayaa sheegay inay diyaarinayaan markab gargaar wada inay ku xiraan dekedda Kismaayo oo ay gacanta ku hayso Al-shabaab. Isagoo sheegay in gargaar walba oo ay ugu talogaleen dadka ku nool deeggaannada ay Xarakadu ka taliso ay ka dajin doonaan dekeddaas.
Ra’iisul wasaaraha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, qoyskiisa iyo xubno ka tirsan xukuumadiisa ayaa booqday Soomaaliya bishii lasoo dhaafay ee Ogoosto, taasoo lagu sheegay inay tahay qorshe uu ku doonayo inuu ku xoojiyo xiriirka uu dalkiisu la leeyahay dalalka Afrika.
← Plight of Somalia
Somalia briefly detains Turkish aid workers →